To/From Mandalay Gazette – Write. Get Published. Get Paid. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » To/From Mandalay Gazette – Write. Get Published. Get Paid.
To/From Mandalay Gazette – Write. Get Published. Get Paid.
Posted by kai on Jan 31, 2011 in Editor's Notes, Letter to The Editor | 600 comments
Reasons to join Mandalay Gazette …
Joinasupportive community of writers
Publish your work immediately
Earn on your articles
Compete for increased earnings in Marketplace
Rules for Writers << Must Read!
ပွိုင့်ပေးစံနစ် (Jan 22 2011)
Number of points for each comment: 10 ( ကော်မန့်တခုအတွက် ၁ဝ ပွိုင့်)
Number of points for each post: 80 (ပို့စ်တခုအတွက် ၈ဝ ပွိုင့်)
Number of points new members get for registering: 400 ( မန်င်ဘာအသစ်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် ၄၀ဝ ပွိုင့်)
Number of points for “daily” login: 2ဝ ( နေ့စဉ် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှု ့ခြင်းအတွက် တရက် ၂ဝ ပွိုင့်)
Points for Link Creation: 40 (မြန်မာနှင့်သက်ဆိုင်သော ဝက်ဘ်ဆိုက်တခု ထည့်ပေးခြင်းအတွက် ၄ဝ ပွိုင့်)
ကိုယ်တိုင်ရေးစာ မဟုတ်သည်များကို ပွိုင့်ပြန်နှုတ်ပါမယ်။
၁ဝရက်အတွင်း အခြားမန်င်ဘာတဦးဦးထံမှ ကောမန့်တခုမှ မရရှိထားသော စာကို ပွိုင့်ပြန်နှုတ်ပါမယ်။
စာမူတခုအတွက်အနည်းဆုံးရေးရမဲ့ စာလုံးအရေအတွက်ကိုလည်း ၃၀၀ဝ ကနေ ၁၅၀ဝ ကိုလျှော့ချလိုက်ပါတယ်။ စာလုံးရေကို သတိပြုကြစေလိုပါတယ်။ အလွန်အမင်းတိုသော စာမူများ မတင်သင့်ပါ။
အယ်ဒီတာအဖွဲ ့က ကြိုက်နှစ်သက်လို့ ရွေးချယ်တဲ့စာမူတွေကိုတော့ စာမူတပုဒ် ပွိုင့် ၅၀ဝ အထိတိုးမြှင့်ပေးဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။ မင်န်ဘာများ ကော်မန့်အရေးများတာရယ်။ ဖတ်ရှုသူများတာရယ်၊ ကိုယ်တိုင်ရေးဖြစ်တာရယ်အပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ ပွိုင့်ကိုတိုးမြှင့်ပေးပါမယ်။
ကိုယ်တိုင်ရယူထားကြောင်းဝန်ခံချက်ပါတဲ့ (ဓါတ်ပုံပါ)သတင်းကို သတင်းရေးဟန်နဲ့ပြည်စုံတယ်ဆိုရင်၊ ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြဖို့ ရွေးချယ်တယ်ဆိုရင် ပွိုင့် ၅၀၀ဝ ပေါင်းပေးပါမယ်။
မြန်မာပြည်တွင်းက မင်န်ဘာတိုင်းဟာ အရင်စည်းကမ်းအတိုင်း ပွိုင့်၁သိန်းပြည့်မှ ငွေသားအဖြစ်စတင်ထုတ်ယူနိုင်ပြီး ၁သိန်းကျော်တာနဲ့ ပွိုင့်များ ဆက်လက်စုဆောင်းထားခွင့်မရှိပဲ ငွေသားအဖြစ်ထုတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (ငွေလွှဲဖို့အတွက် အသေးစိတ်ကို pm, email နဲ့ညှိနှိုင်းပါမယ်)
မြန်မာပြည် ပြင်ပနေ မန်င်ဘာများ ပွိုင့်ကိုငွေသားအဖြစ်ပြောင်းလဲထုတ်ယူခွင့်မရှိ။
ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြဖို့ရွေးချယ်တဲ့စာမူများရှိရင်လည်း အဆိုပါစာမူအတွက် စာမူခသီးသန့်ချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပြီး တပုဒ်အတွက် ဒေါ်လာ ၂၀+ဖြစ်ပါတယ်။
ထူးခြားတဲ့သတင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါက တပုဒ်အတွက် ဒေါ်လာ ၂၀+ ချီးမြှင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ရရှိထားတဲ့ ပွိုင့်တွေကို မည်သူ့ကိုမှ လွှဲပြောင်းခြင်း မပြုလုပ်ရ။
စည်းကမ်းများ၊ပွိုင့်များဟာ ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိပဲ အချိန်မရွေးပြောင်းလဲပါမယ်။ မန္တလေးဂေဇက်ရဲ့ ငွေကြေးရံပုံငွေအပေါ်တည်မှီနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။
မန်ဘာများဟာ ၆လဆက်တိုက် ပွိုင့်အပြောင်းအလဲမရှိပဲဖြစ်နေရင် မန်င်ဘာအဖြစ်က ရပ်စဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပွိုင့်များလည်း ဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းတစုံတရာကြောင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်ဟာ ပိတ်သိမ်းတော့မယ်ဆိုရင် Top Ten မှာပါတဲ့သူများကိုသာ ရရှိပြီးပွိုင့်များအား ငွေသားအဖြစ် ထုတ်ပေးပြီးပေးလျှော်မှာဖြစ်ပါတယ်။
New Member များဖတ်ကြည့်ကြရန်
ယ္ခု သီတင်းပတ်အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့် မှတ်သားဖွယ်သတင်းများ ကဏ္ဍကို ယခု တပတ် (၂၈.၆.၂၀၁၁-၅.၇.၂၀၁၁) ကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ အဆင်မပြေမှုများကို တောင်းပန်ပါသည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ် သတင်းလင့်များကို
အထက်ပါနေရာတွင် ဝေငှနိုင်ပါကြောင်း။ နောင်လာမည့်သီတင်းပတ်တွင် ပုံမှန်တင်ဆက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်
eros အသည်းကွဲနေပါသဖြင့် သတင်းမတင်နိုင်သေးပါကြောင်း
ပိုစ် တင်ရင် ..ကွန်းမကောင်းပဲတက်သွားရင် comment off ဖြစ်သွားရောစာတွေလည်းပြတ်ကျန်ခဲ့တယ်
edit လုပ်ပြီးပြန်တင်ရင် comment off နဲ့ပဲပြန်တက်တယ်
comment on ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ တစ်ချို့စာလေးတွေ
comment မရှိရင် အဖျက်ခံရမှာစိုးလို့ပါ…ပြောပြပါနော်။။။။
shwe ni says:
history of 2000 donation group post ကိုဝင်လို့မရပါဘူးရှင် internal server error ဆို ပြီးပြနေပါတယ် ။ကျန် ပိုစ်များဝင်လို့ရပါတယ် . ရွာသားများစစ်ကြည့်ပေးပါဦး
စာလေးတစ်ကြောင်းရေးလိုက် ပုံလေးတွေတင်လိုက်ရယ် ပုံတွေအများကြီးတစ်ခါတည်းတင်ချင်ပါတယ်ဘယ်လိုတင်ရမလဲပြောပြပါ
ဓါတ်ပုံတင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာ ၂ရက်ရှိပြီ
Browser Uploader နဲ့ရော Flash Uploader နဲရော စမ်းကြည့်တာ မရဘူးဖြစ်နေလို့…
သူကြီးရေ Gate Pass ပါမှ ရွာထဲဝင်လို့ရတယ်။
စာချည်းပဲပါတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုတင်တာ စာအပြည့်အစုံပါမလာဘူး
Editလုပ်တာလည်း မရဘူး၊ ပိုဆိုးသွားလို့(အရင်ပေါ်နေတဲ့စာလုံးထက်တောင် လျှော့သွားတယ်)
Postကိုပြန်ဖျက်ပြီး အသစ်တင်တော့လည်း အရင်အတိုင်းပဲ တဝက်တပျက်ပဲပေါ်တယ်
(Edit, Post, Error, Connection တို့အား မြန်မာမှုသို့ အတိုဆုံး တိုက်ရိုက်ဆီလျော်စွာ
စကားပြောအတိုင်း ပြန်ဆိုနိုင်လျှင် ကောင်းလေစွ)
ပန်ပန် လိုပဲ ကျွန်တော်လည်းခဏ ခဏဖြစ်တယ်။ မနေ့ကတင်တဲ့ပိုစ့်တောင် အဲဒီလိုဖြစ်လို့ ပြန်လုပ်လိုက်ရသေးတယ်။ ကျွန်တော်ဆို တစ်ခါတစ်ခါ ခေါင်းစဉ်ပဲပေါ်တယ်။ စာလုံးဝမပေါ်ဘူး။
သဂျီးမှာ ထိုကိစ္စအား ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသည်ကို ဖြေရှင်းပေစေလိုကြောင်း
အမာခံ တိုက်စစ်မှူး Etone နဲ့ ဆူး အပြင် အခြား လူတွေဝန်းရံလိုက်တာ သဂျီးရွာ အတော်လှလာပါလား ။ ဟိုတလောကတော့ ဘာတွေလဲမသိ ဝင်ရောက်သောင်းကျန်းတာ တကယ်ရေးနေတဲ့လူတွေမပြောနဲ့ ကိုကမရေးတတ်တဲ့လူတောင် ဖတ်ရတာတင်စိတ်ညစ်ရော ။
ဒါနဲ့ သဂျီးက ဘယ်ဘာသာကနေ ပြောင်းလာတာလဲ သိပါရစေ ။ ကိုကြောင်ကြီးပြောနေတာ မစောင့်နိုင်တော့လို့
Justaquick update to let you guys know what I’ve been doing lately, our website(village) is moving toanew (county)server.
နေရာရွေ ့နေပါသဖြင့် အခက်အခဲရှိပါက တောင်းပန်ပါသည်ခင်ဗျား..
ပုံများ လောလောဆယ် ပါလာမည်မဟုတ်သေးပါ..။
ဪဒါကြောင့်ကိုး ဝင်ရတာပါ ခက်နေတယ်။
ဒါကြောင့်ကိုး ဒီမှာ တင်မရဖြစ်နေတာရယ်… တင်ပြီးသားပြန်ကြည့်တာ ပုံမပါတာရယ်….. ။ :angry: မနက်မိုးလင်းကတည်းက တင်နေတာ မရဘူး … မရလို့ ဖြစ်မလား ရရမယ်ဆိုပြီး တင်နေတာ … အခုထိပဲ ။ မောလိုက်တာ
29.6.2011 မြန်မာစံတော်ချိန် ရ နာရီခန် ့တွင် ရွာထဲ သို ့ဝင်ရန် လိပ်စာ ရိုက်ထည့်လိုက်သော်လည်း ပြလာသည် မှာ
သို ့နှင့် ရွာအား MPT မှ ဘန်းလိုက်ပြီများလား ဟု https://www.vtunnel.com နှင့် ဝင်ပြန်သော်လည်း
Couldn’t connect to myanmargazette.net:80: Connection refused တဲ့ ။
Reload ခဏခဏ ပြန်လုပ်သော်လည်း အထက်ပါ စာများသာ ပြနေသဖြင့် ဘာလုပ်လို ့လုပ်ရမှန်းမသိ ။
နောက်ဆုံး မေးလ် ထဲ မှာ ကိုယ်တင်ထားသည့် post ကို comment ပေးထားသည် မှ ဝင်မှ သာ ရွာထဲ သို ့ဝင်လို ့ရတော့ သည် ။ တော်သေးပါရဲ ့
ပထမ ဆုံး ကွန်မင့် ပေးရင် ၁၅ မရတော့ဘူး ဗျို ့။ ၁ဝ ပဲ ရတော့တယ် ဗျို ့
အခုတင်မှ ဝင်လို့ရသွားတာ။ ဆာဗာပြောင်းနေလို့ဖြစ်မှာပါ။
တနေ့ခင်းလုံး လုံးဝ ဝင်မရဘူး…
ပိုစ်ထဲ လာမန်းတယ် ဆိုရင် အရင်က ပွိုင့် ၅ ရတယ် အခု မရတော့ဘူး။
ကွန်မန်း တခု ၁ဝ ပိုစ် တခု အတွက် ၁ခါပဲ ရမယ်။
အခု စမ်းနေတဲ့ ပွိုင့်စံနစ်သစ်အရ…
မန်းတာတခုတက်ရင်.. မန်းသူက ၁ဝပွိုင့်ရပါတယ်..။
ပို့စ်တင်သူပိုင်ရှင်က.. ၅ ပွိုင့်ရပါတယ်..။
ဆိုတော့.. ကောင်းတဲ့ပို့စ်..လူတွေဆွေးနွေးတဲ့ပို့စ်မျိုးဆို.. မန်းတာအခု ၅ဝရဖို့မခက်ပါ..။
ပို့စ်တခုက… ၅ x၅ဝ = ၂၅၀+၅ဝ = ၃၀၀ဝွိုင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..
… ရွာသားတွေ..ဝိုင်း ဆွေးနွေးစေအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ..ပို့စ်တွေများများရေးနိုင်ကြဖို့..ရည်ရွယ်ပါတယ်..။
ပို့စ်ပိုင်ရှင်က..ကိုယ့်စာတွေကို တာဝန်ယူ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပြီး.. ပို့စ်ပိုင်ရှင်ကိုတော့..ကိုယ့်စာကိုယ်ပြန်မန်းတာအတွက် ပွိုင့်မပေးပါ..။
ကျန်မန်းတဲ့သူတွေကလည်း.. ပို့စ်တခုမှာ..တခုထက်ပိုမန်းရင်.. ပို့စ်တင်သူမူရင်းစာပိုင်ရှင်ကပဲ..၅ပွိုင့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်..။
အင်မတန်တော်ပြီးဉာဏ်သွားလိုက်တဲ့သူကြီး၊ ဘယ်ရမလဲ comment 15ကျပ်ပေးတုန်း ခါတော်မှီ မန့်လိုက်တာ တညတည်းတော် ပွိုင့်တွေ ရလိုက်တယ်။
သူကြီးထက် ပိုဉာဏ်ကောင်းတဲ့သူတွေ ရွာထဲမှာ အများကြီးနော် …
ကွန်မန့်တစ်ခုတက်လာတိုင်း ပို့စ်ပိုင်ရှင်က ၅ မှတ်ရတာကိုတော့ ကြိုက်တယ် … အဲဒါမှ ပို့စ်ကောင်းကောင်းရေးချင်စိတ်ပေါက်လာမှာ ..
ချစ်စ/ဆ ရာ says:
အဘပုဘာလုပ်လိုက် ပြန်ပြီဒုံး ။
ဘာလဲ သဂျီးသမီးကိုမင်းက ကြိုက်နေလို့လား
ငါရစရာရှိတဲ့ပွိုင့် နှစ်သောင်းကျော် လျှော်ပေးရင်ထွက်မယ်လို့
ဒီနေ့ သတိထားမိတာ တခု ရှိပါတယ်။
မနေ့က မန်းထားပြီးသား ပိုစ်တွေမှာ ဒီနေ့ ကွန်မန်း မတွေ့တော့ဘူး အမှန်က ပိုစ်တင်တဲ့ လူက ဖျက်တာ မဟုတ်ဘူး။ မတူညီတဲ့ နေရတွေက ဝင်ကြည့်ရင် ရှိပါတယ်။ ဝင်ကြည့်ပြီး နိပ်မိတဲ့ နေရာကွာနေလို့ ဖြစ်နေသလိုပဲ။
မနေ့က ကွန်မန်း ၁ဝခု လောက် ရှိတဲ့ ပိုစ်က ဒီနေ့ ကွန်မန်း ၁ခု ၂ခု ဆိုပြီး ပြနေတယ် ထပ်ပြီး မန်းလိုက်တော့ လည်း ပွိုင့် မှတ်စနစ်က မန်းထားပြီးသား သိလို့ ပွိုင့်မပေးပါဘူး။
နောက်ထပ် တနေရာက အဲဒီ လင့်ကို ပြန်ရှာဖွင့်တော့ အရင်ကွန်မန်းတွေ ရှိနေပါတယ်။ ထူးဆန်းတယ်လို့ ထင်တယ်။ အသိပေးတာပါ။
သဂျီးရေ ပိုစ့် တစ်ခုမှာ ကွန်မန့်တွေက နှစ်ခုကွဲနေပါတယ် အဲတာ ဘာဖြစ်တာလဲ မသိဘူး ကြည့်ပေးပါဦး
အခုလဲလဲ နွယ်ပင်တင်ထားတဲ့ “လွဲတော့ လွဲတာပေါ့ …” ပိုစ့်မှာ အဲလိုဖြစ်နေပါတယ် …
လွဲတော့ လွဲတာပေါ့ ပိုစ်တင် မဟုတ်ပါဘူး ပိုစ်တော်တော် များများ ဖြစ်နေတာ သတိထားမိပါတယ်။ လွဲတော့ လွဲတယ် ဆိုတဲ့ ပိုစ်ကို စမြင်ခါစ မို့ အသံပေးမိတာ.. ဒီနေ့ ပိုစ်တွေ တော်တော် များများ အဲလို ဖြစ်နေတာပါ။
ဘယ်လိုကွဲနေသလည်းမသိ.. သွားကြည့်တော့… ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်နေပါတယ်..။
ဝင်ကြည့်တဲ့ နေရာ ကွဲရင် ကွန်မန်း ပေါ်တဲ့ ပုံစံ မတူဘူး။
dashboard> comments ကနေ တဆင့် ဝင်ရင် ကွန်မန်း အကုန် မြင်ရတယ်။
ပင်မ စာမျက်နှာက လင့်နိပ်ဝင်ရင် တချို့တလေ ကွန်မန်း အကုန်မပေါ်ဘူး မပေါ်လို့ မပေါ်ဘူး မန်းလိုက်တာ ပင်မ စာမျက်နှာက လင့်မှာ မတက်ပြန်ဘူး။
browser ရဲ့ cache ထဲကနေ ထုတ်ပေးရတဲ့ အခါမျိုးမှာ update မဖြစ်တာ ဖြစ်နို်င်ပါတယ်။ web- caching server ( ဥပမာ – ISA လိုမျိုး) တွေ ကနေတဆင့် ဖြတ်ထွက်ရတာ ဆိုရင်လဲ cache ထဲက ထုတ်ပေးတာမို့ အဲသလို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ offline website data တွေ clear လုပ်ပြီး ပြန်ခေါ်ကြည့်ရင်တော့ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။
ဆူး ဖြစ်တာ browser ၂ခု ခွဲကြည့်လို့ ဖြစ်တာ မဟုတ်ဘူး တခုတည်းမှာကို tab တွေ ခွဲပြီး ဖွင့်ထားရင်းကို အဲလို ဖြစ်တာ.. window တခုတည်းမှာကို ဖြစ်တာနော်..
Post တွေက IE နဲ့ ဖွင့်ကြည့်တော့တစ်မျိုး Mozilla နဲ့ကျတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်
မနက်ကတည်းက IE နဲ့ဖွင့်တာ Update မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်
သူကြီး အိတုံ ရဲ့ မြွေအရေခွံခွာတဲ့ ပို့စ်က Home ကဝင်ပြီးကြည့်ရင် စာ၊ပုံ မြင်ရတယ် Comments by Post အောက် ဝင်ကြည့်ရင် ပို့စ်ထဲရောက် စာ၊ပုံ ဘာမှမပေါ်ဘူး
အော် ဒီရွာကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူကြီးမင်း မြန်မာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေလိုပါဘဲလား ……….
တော်ကြာပြင်လိုက် အတည်ပြုလိုက် ထပ်စဉ်းစားလိုက် .. ပြင်လိုက် … အတည်ပြုလိုက် ….
ထပ်စဉ်းစား လိုက် …. တိုးလိုက် လျျှော့လိုက် … ပြင်လိုက် … လိုက် …လိုက် …လိုက် …။
ဦးကြောင်ကြီးက mdyleaks အတွက် ဝင်ဖတ်သူတွေကို ၁၀ဝပွိုင့်တိုးပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်
site admin> cube point မှာကြည့်ပါတဲ့
ပန်ပန် ဒီတိုင်း မရဘူး.. လုပ်ဆောင်ရမဲ့ အဆင့်တွေ ရှိတယ်။ ပိုစ် တခု ထောင် မရသေးကြောင်း အတိ အလင်း ကြေညာ.. ထပ်တူ ထပ်မျှ မရသေးတဲ့ ရွာသားတွေ ဝိုင်းပြီး ထောက်ခံ အဲလို မျိုးနဲ့ ပေးမှာ ပန်ပန်ရဲ့.. ပေးတာတော့ တကယ်ပေးမှာ..
ပိုစ် ၅ဝ မရသေးတဲ့လူ ၁ဝ ယောက် ထောက်ခံ ပေးရင် ၁၀ဝ ရပါမယ်။
ပန်ပန် တင် မဟုတ်ဘူး တခြား မရသေးတဲ့ သူတွေလည်း မရသေးကြောင်း သီးခြား ပိုစ်တွေ ထောင်ပြီး အကြောင်းကြားစာ ထုတ်လိုက်ကြပေါ့။
ဘာမှတောင်လုပ်စရာ မလိုဘူး (ကိုကြောင်ပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး)သူကြီးက ကျွန်တော့် ပွိုင့်ကိုတော့ ၁၀ဝ တိုးပေးထားပါလား နည်းလမ်းတော့ နဲနဲကွာမယ်ထင်တယ်
သူကြီး ကျွန်တော်တင်ထားတဲ. MG စတင်ထုတ်ဝေတဲ.နေ.
ဆိုတဲ.ပို.စ်ရယ် အဲဒီကရတဲ. ပိုက်ဆံရယ်ပျောက်နေပါတယ်
သူကြီး ခင်ဗျာ ။ ။
MG ထဲ မဝင်ရသေးခင် မေးလ် ထဲ ကို ဝင်ကြည့်တော့ ကျွန်တော် တင်ထား တဲ့ “ ကက၊ခခ ” ပို ့စ်မှာ ကွန်မင့် ၅ ခု ရှိကြောင်း မေးလ် ၂ စောင် ရောက်နေတယ် ဗျာ ။ ဒါနဲ ့MG ထဲ က ကျွန်တော့် ပို ့စ် ကို လက်တွေ ့ကြည့်လိုက်တော့ “pan pan” နဲ “့ရွှေဘိုသား ” တို ့၂ ယောက်ထဲ ရဲ့ကွန်မင့် ၂ ခု ပဲ တွေ ့ရပါတယ် ။ ကျန်ကွန်မင့် ၃ ခု မှာ ပျောက်နေတာ ကို တွေ ့ရပါတယ် ဗျို ့။ မည်သို ့မည်ပုံ ပျောက်သွားသည် ကို သူကြီးမင်း စုံစမ်း ပေးတော်မူပါ ခင်ဗျာ ။ ကျေးဇူးတင်ရှိလျှက်ပါ ။
သဂျီးရေ မနက်ကတင်ထားတဲပ ပိုစ်ရော ကွန်မန့်တွေရော ပျောက်နေပါတယ် မနက်က 12း00 နာရီလောက်ထိရှိနေပြီး အခု တစ်ခ့ပြန်ဖွင့်တော့ ပျောက်နေပါတယ် …
သဂျီး ကွန်မန်း ပျောက်တဲ့ ကိစ္စ အီးမေး နဲ့ ပို့ပြီး တိုင်ကြားထားပါတယ်။
eros သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စများကြောင့် မန်းလေးဂေဇတ်တွင် လုံးဝရေးတော့မည် မဟုတ်ပါ။ လုံးဝပတ်သတ်တော့မည် မဟုတ်ပါ
အီးရိုးသည် ပေါင်ပေါ်က ပိတ်စ ကြွက်ကိုက်ခံရလို့ နတ္တိ မရှိဖြစ်နေသဖြင့် ရွာထဲကို လည်ပတ်ရန် လုံးဝ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေကြောင်း သတင်းကြားသိရပါသည်။
erosသည ်ဤGZကို သံယောဇဉ်ရှိသည့်အားလျှော်စွာ ရွာထဲတွင်လည်ပတ်ရသည်ကို နေ့စဉ်အလုပ်တခုကဲ့သို့ပျော်ပိုက်ခဲ့သည်။
သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများကိုလည်း ခင်မင်ကူညီအားနာတတ်သည့်အကျင့်လည်း ရှိပါသည်။
ယခုတလော ဤGZတွင် သူ့ထက်ငါတိုက်ခိုက်လို၍သော်လည်းကောင်း စနောက်၍သော်လည်းကောင်းရေးသားမှုများသည် ရေးသူအဖို့အဘယ်သို့အကျိုးရှိသည်မသိသော်လည်း သူတဖက်သား၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာက ိုထိခိုက်သည်ကိုသတိပြုစေချင်သည်။
နောင်အခါတွင် ကိုယ်ပေးသောcommentသည ်သူတပါးအားထိခိုက်မှုရှိမရှိစမ်းစစ်ပီးမှရေးလျင် ပိုပီးသင့်တော်မည်လို ့အကြံပေးလိုပါသည်။
comment off လည်းဖြစ်နေပါတယ်ရှင့်။
အဲ့ဒီပို့စ်ကို အက်ဒစ်ပြန်လုပ်ပြီး comment off ဆိုတဲ့ အောက်ဆုံးကဟာလေးကို ကလစ်ခြစ်ပေးလျှင် ရပါတယ်…
တင်ထားသော လူကြီးသူငယ်နာ ပိုစ့် ပျောက်နေပါသည်။ ကိုယ်တိုင်လည်း save လုပ်မထားရသေးပါ၍ ပြန်လိုချင်ပါသည်။ ကိုယ့်ပိုစ့်ထဲမှာ ပြန်ရှာတာလည်း မတွေ့ပါ။
စာပျောက်နေသူတွေ.. မန်းတာပျောက်နေသူတွေ… http://MandalayGazette.org မှာ ပြန်ရှာကူးတင်ကြပါနော..။
http://MandalayGazette.org မှာတော့ ဘာမှမတင်ပါနဲ့ဦး..။ အဲဒါ Back up အဖြစ်ထားတာမို ့ပါ…။
ပုံတွေ..နောက်နေ့မှ ပြောင်းနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်..။ စိတ်မပူကြပါနဲ့..ပုံတွေအားလုံးရှိပါတယ်..။
ဝက်ဆိုက်ကိုအလေးအပင်လျှော့အောင် .. ပုံတွေကို ရွာထဲဒါရိုက်မတင်ပဲ.. တခြား ပုံအလကားပေးတင်တဲ့နေရာမှာတင်.. ရွာထဲမှာ လင့်ခ်ပဲလှမ်းပြတာမျိုးဖြစ်အောင်… ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုတင်ကြရသလည်း ဘယ်လိုလုပ်ရသလည်း.. သိသူတွေ ပြောပြပေးကြပါဦး..။
ဆူး ကတော့ ဖေ့ဘွတ် နဲ့ ပီကာဆာ ကို သုံးတယ်။
ပီကာဆာ က ပို အဆင်ပြေတယ်။
ဖေ့ဘွတ်က တော့ တင်လိုက်ရင် အားလုံး ဝိုင်းကြည့်ပြီး ကွန်မန်းတွေ အီးမေးတွေ ဝင်လာလွန်းလို့ မျက်စိနောက်တယ်။
သဂျီးရေ အခုကျတော့လည်း ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ပို့စ်မှာ မန်းထားကြပေမဲ့ မေးလ်ထဲ မဝင်ဘူး … အဲ့ဒီတော့ ဘယ်သိပါ့မလဲ … ။ မျက်လှည့်တွေချည်းပြနေတယ် စတေဘယ်လ်ကို မဖြစ် နိုင်ဘူး ။
ခုလေးတင် ပြန်ဝင်ပါတယ် … အီးမေးလ်ဝင်ပေမဲ့ ပို့စ်ပေါ်ရောက်ပြီး ကြာတာတောင် delay ဖြစ်နေတယ်နော် ။
ဟိုတစ်လောက အရမ်းပွဲဆူ ခဲ့တဲ့ ဦးခင်မောင်ချို ့ရဲ ့ကလေး ဆိုတာ 2.7.2011 က ဆုံးသွားပြီ လို ့သိရပါတယ် ။ နောက်ပြီး အဲဒီကလေးဟာ ဦးခင်မောင်ချို ရဲ့တူလေးပါတဲ့ ။ သား မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ ။ အသုဘ လိုက်ပို ့ခဲ့သူ ကို မေးကြည့်ရာမှာ ဘာရောဂါ နဲ ့ဆုံးတာလဲ ဆိုတော့ အက်ဆီးဒင့် ဖြစ်တုန်းက ရခဲ့တဲ့ ဒဏ် နဲ ့ပဲ လို ့သိရပါတယ် ။ သတင်းအတိအကျ သိရှိသူများရှိရင် တင်ပေးကြပါဦးလို ့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နော် ။ ကျွန်တော် အခုရေးလိုက်တာ က ပြည့်စုံမှု မရှိတဲ့ အတွက် သည်းခံ ပေးကြပါ
သဂျီးရှင့် Social protection for Immigrant workers ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတ စုံသောရွာသူရွာသားများမို့ သိသလောက် ဆွေးနွေးပေးပါ ဖို့ ဖိတ်ခေါ်တဲ့ ပိုစ်ကို ဖိုရမ်မှာတင်ထားပါတယ် ။ အားလုံးသိအောင်ဘာလုပ်ရမလဲ ရှင့် ဖိုရမ်က ကိုတောင်သိတ်မဝင်တတ်လို့ပါ ။
သဂျီးရေ- တချို့မန်ဘာတွေ site ကို ဖွင့်ဖတ်လို့တော့ရတယ်။ sign in ဝင်မရဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဘာဖြစ်မှန်းလဲ မသိ။ ကော်နက်ရှင်ရပြီး ဝင်မရတာမို့ မန်ဘာကို block လုပ်ထားတာများလား သိချင်နေပါတယ်။
မမရေ ကျေးဇူးပါ . ဒီ ပိုစ် ဘယ်သွား ရှာ ရမှန် မသိဘူးဖြစ်နေတုန်း တက်လာလို့ ။
သူကြီး ကို မေးချင်တာလေးရှိလို့။
“စာမူတခုအတွက်အနည်းဆုံးရေးရမဲ့ စာလုံးအရေအတွက်ကိုလည်း ၃၀၀ဝ ကနေ ၁၅၀ဝ ကိုလျှော့ချလိုက်ပါတယ်။ စာလုံးရေကို သတိပြုကြစေလိုပါတယ်။ အလွန်အမင်းတိုသော စာမူများ မတင်သင့်ပါ။”
သူကြီးခင်ဗျား .. မတင်သင့်ပါ ဆိုသည်မှာ တင်ချင်လျှင်တော့ ရပါသည် ဟု မှတ်ယူ ရမလားခင်ဗျာ။
အဲဒါကို အောက်ကစည်းကမ်းနဲ့ ပြန်ချိန်ဆစေချင်တာပါ..။
12. Post/Comment တို့ကို စာဖတ်သူတို့အတွက် အကျိုးရှိ/ကျန်ရစ်စေမည့် စာများသာရေးကြပါရန်။
မေးပါရစေ သဂျီးရေ …
လျှာရှည်တယ်ရယ်လို့ ထင်စေချင်ပါဝူး(လျှာရှည်တာ သိပီးမင့်ကိုး နော့ ..)
၁။ ကော့မန့်တွေမှာ ရေးတဲ့လူ ရဲ့အောက်မှာ date/time နှင့်တကွ ကြယ် ၄လုံးကို
တွေ့ရပါသည်။ သဂျီးအပါအဝင် hit ၅ထောင်ကျော်ရှိတဲ့ ဖွားဆူးပင် ကြယ် ၁လုံးအဆင့်မှ
သည် ကြယ်တွေကိုတော့ဖြင့် တချို့ တချို့သော ဖိုရမ်တွေလို ယူဇာတွေကို
rank ခွဲချင်လျင် သုံးတဲ့ tool အဖြစ် နားလည်ထားပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့ခည ..ခွဲချင်လျင်သုံးပါ … မခွဲဘူးဆိုလျင် …အနှီ ကြယ် ၁လုံးသည်
၂။ လူမသိ သူမသိ အနီကဒ်ပေးတဲ့ကိစ္စ …
ဂေဇက်စောင့်ကြီးလို ပုဂ္ဂိလ်ကိုပင် အနီ၅ကတ်ပေးတာ ကြုံလိုက်ရပါသည်….
တဖြစ်သင့်ပိ guest အနေနဲ့ ဝင်ရောက်သူတွေပါ အနီကဒ်ပေးသူတွေပါ
record ကျန်သင့်ပါသည် … မူရင်းစာရေးသူက မေးမြန်းရှင်းလင်းခွင့်
ရှိသင့်ပါသည်…တလုံးမှ ဝင်မရေးဘဲ …လူမသိသူမိ အနီကတ်ပြခွင့်မှာ
တရားမျှတသည်ဟု … မယူဆကြောင်းပါ
၃။ သတင်းတန်ဖိုး .
own tune နဲ့ copy ကိစ္စလိုမျိုးပဲ သဂျီးရေ
ဖန်တီးတင်ဆက်သူတွေ အတွက် …..မူရင်းသတင်းကို ကိုယ့် opinion လေးဖြည့်စွက်ပီး
အုန်းကျုန်း လုပ်တဲ့ သူတွေ စာတွေ့ကို ငါတွေ့လုပ်တဲ့သူတွေ နဲ့ တတန်းထဲ ထားခံရတာ
မကျေနပ်စရာပါ… အများစု စည်းကမ်း ရှိပါသည် တချို့တလေ ..စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းပါအိ။
(နံပါတ် ၃ ကတော့ ရှာဖွေဖော်ထုတ် အရေးယူဖို့ ခက်လို့……လူခွဲမရှိလို့ဆိုတာ နားလည်ပါသည် …
နံပါတ်၁ နှင့် ၂ ကိုတော့ဖြင့် … ရှင်းပေးစေချင်ပါသည်)သဂျီးခင်ဗျား
၁) အဲဒီကြယ် ဘာကြောင့်ထားသလည်း.. ကျုပ်လည်း မသိပါခင်ဗျာ..။ ဒါပေမဲ့.. အစိမ်းကဒ်ပေးတာများရင်တော့.. ကြယ်၂လုံးဖြစ်ပါတယ်..။ ဆူးမမ တခါဖြစ်ပြီး.. အနီကဒ်တွေပြန်ဝင်လာသမို့ ပြန်ပျောက်သွားပါတယ်..
ယူဆာ Rank က.. ပွိုင့်နဲ့ ခွဲပြီးသားဖြစ်ကြောင်းပါ..။
၂) Server Log သွားကြည့်ရင်တော့.. အနီကဒ်ဆရာတွေ သိနိုင်ပါတယ်..။ ဒါပေမဲ့.. အဲဒီအနီက.. အချိန်ကာလတခုပဲ ရှိထားပြီး အလိုလို ပြန်ပြန်ပျက်သမို့.(Reset လုပ်သမို့). စိတ်ထဲ မထားပါနဲ့လို့ပဲ ပြောပါရစေ..။
guest တွေဝင်လုပ်နေတာ များပါတယ်..။ ဆိုတော့.. စာဖတ်သုတွေ ရင့်ကျက်လာပါစေဆိုပြီး ထားတာပါပဲ..။
၃) သတင်းတန်ဖိုးကို.. ရွာသူားတွေထဲကပဲ.. ကော်မန့်နဲ့.. ဆုံးဖြတ်ပေးနေတယ်လို့.. သဘောထားမိပါတယ်..။ ကျုပ်ကတော့.. ငွေ(ပွိုင့်)နဲ့ပဲ တိုင်းထားပါတယ်..။
Template နဲ့ဆာဗာ ဆက်တင်တွေ ပြင်ချင်တာ.. တတ်ကျွမ်းနားလည်သူတွေ ကူဖို့ ပြောချင်တာပါပဲ..။
သဂျီးဆာဗာ ပိုးကိုက်နေပြီ။ ၇၅ဝ ဒီဂရီ ကျွက်ကျွက်ဆူနေတဲ့ ရေနွေးအိုးထဲကို ဆာဗာထဲက ကလီစာတွေဖြုတ်ပြီး ဆယ်နာရီကြာအောင် စိမ်ထားရမယ်။ virtual ဆာဗာဆိုရင်တော့ ဆာဗာကုမ္မဏီကို ရေနွေးအိုးမသွားပြီး ကိုယ်တိုင်လုပ်မှ ရမယ်။ သူတို့ကို မခိုင်းနဲ့၊ ငပျင်းတွေ လုပ်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။
ဒီနေ့ အမေကြီးကားမှာ ကျေးဇူးတော်နေ့ တဲ့ သူကြီးတို့ ကိုကြောင်ကြီးတို့ အားလပ်ရက် ရပြီး ဘာတွေ လုပ်နေလဲ
သူကြီး သမတ ကကြက်ဆင်နှစ်ကောင် လွှတ်ပေးတယ် တဲ့ ဘာကြောင့်လဲ ၊ သူကြီးများ သိမလားလို့ပါ ခင်ဗျာ ၊ ကြို တင် တိုင်ပင်တာမျိုး ဘာညာ ပေါ့
အတော်ပဲ၊ ကျနော်လည်း ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းမှာ ကျေးဇူးတော်နေ့နဲ့ ဆိုင်တာတွေ့လို့ သဂျီးကို ကလိမလို့ မန်းမလို့ နေရာရှာနေတာ။ အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်။
သူ့ရာဇဝင် အတိုချုပ်ကတော့ အမေရိကတိုက်ကို ရှေးဦစွာပြောင်းလာသူ အဖြူများ သေလုမျောပါး ဖျားနာမကျန်းဖြစ်စဉ်မှာ ဒေသခံ ရက်အင်ဒီယန်းများရဲ့ ပြုစုစောင့်ရှောက် ဆေးဝါးကုသပေးမှုနဲ့ အသက်ချမ်းသာရာ ရတာကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ကြက်ဆင်သားချက်ပြီး ပြန်လည်ကျေးဇူးပြု တုံ့ပြန်တဲ့သဘောလို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။ မှားနေရင်လည်း ပြင်ပေးကြပါ။ အဲဒီအချိန်လောက်အထိတော့ ဒေသခံတွေနဲ့ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူများ အဆင်ပြေသေးပုံရပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ရက်အင်ဒီးယန်းများ အနှိပ်ကွပ်ခံရ၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက် အပြောင်းအရွှေ့ခံရပါတယ်။။
ကျေးဇူးတော်နေ့ ယူအက်စ်နေသူများ ဘာလုပ်သလဲဆိုတော့ အားလပ်ရက် ထုံးစံအတိုင်း စုံတွဲများက ဟိုဒင်းလုပ်ပြီး အတွဲမရှိသူများက ဟိုဟာလုပ်ပါတယ်။ နားမလည်လဲ သဘောပေါက်သလိုသာ တွေးကြည့်တော့ဗျာ။ သဂျီးကတော့ ယဲ့ယဲ့ပဲကျန်တော့တယ်။ ကွန်ပြူတာ ကီးဘုတ်တောင် မနှိပ်နိုင်တော့ဘူး ပြောသံကြားတယ်။ သဂျီးရေ ကြက်ဥနဲ့ပျားရည်သောက်၊ သိပ်လည်းမကဲနဲ့၊ နယူးရီးယားအတွက် ချန်ထားအုံး။။။။
ကြက်ဆင်ခြင်းတူပေမဲ့ ကံခြင်းမတူဘူး သဂျီးရေ…
ဗုဒ္ဓဟူး, 23 နိုဝင်ဘာ 2011
ကျေးဇူးတော်နေ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ဆင်နွှဲ
By ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်ဟာ Thanksgiving Day လို့ခေါ်တဲ့ ကျေးဇူးတော်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတက ကြက်ဆင်တွေကို ဘေးမဲ့ပေးတာဟာ နှစ်စဉ်လုပ်လာတဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အားလပ်ရပ် စားပွဲသောက်ပွဲတွေအတွက် အစားခံဖြစ်ရမယ့်ဘေးကနေ ကြက်ဆင်နှစ်ကောင်ကို သမ္မတက မနေ့က ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ကျေးဇူးတော်နေ့ တရားဝင် အားလပ်ရက်မတိုင် တစ်ရက်အလို မနေ့က သမ္မတ အိုဘားမားဟာ သူ့ရဲ့သမီးနှစ်ယောက်နဲ့အတူ အိမ်ဖြူတော်ရဲ့ အပြင်ဘက်ထွက်ပြီး ကြက်ဆင်နှစ်ကောင်ကို ဘေးမဲ့ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းခြင်းလို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီ ကြက်ဆင်နှစ်ကောင် လွှတ်ပေးတာဟာ လွှတ်တော်ရဲ့ အတည်ပြုချက်မလိုတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ သမ္မတ အိုဘားမားက အဲဒီပွဲမှာ နောက်ပြောင်ပြောခဲ့ပါတယ်။
တခြား ကြက်ဆင်နှစ်ကောက်ကိုတော့ ဝါရှင်တန်တဝိုက်က စားစရာမဲ့နေတဲ့သူတွေအတွက် အစားအစာ စုဆောင်းတဲ့ နေရာတစ်ခုမှာသွားပြီးတော့ သမ္မတ အိုဘားမား၊ သမ္မတကတော်နဲ့ သမီးနှစ်ယောက်တို့က လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။
ဦးကြောင်တော့ ဘာလုပ်နေတယ် မသိဘူး
ကပေပြလို့ သဂျီးတို့လူစုကတော့ တက်မွန်မြင့်ဂလေးကို
*ဝိုင်းချ နေကြတာတွေ့တာပဲ မဟာဖေ့စ်ဘုတ်တော်ကြီးမှာ တွေ့တာ.
ကီးဘုတ်နှိပ်ဖို့ အားတောင် မကျန်တော့တာတော့
တားလည်း ဉာဏ်မမီလို့ မတိပါဝူးခညား
(*ဆု တလုံး ကျန်ခဲ့ပါသည်..)
သမ္မတဂျီးက ကြက်ဆင်တွေ လွတ်ပေးတော့
သဂျီးက သမ္မတဂျီးလောက် အဆင့်မမြင့်တော့ ကြက်တွေ ဒီနေ့ အသက်သတ်မှာ လွတ်ပေးသင့်တယ်.. ရှုပ်ပါတယ် သတ်သတ်လွတ်သာ စားလိုက်ပါတော့။
ကျွန်တော်ကတော့ အခုလိုရေးတယူ ရွာကိစ္စ ကို ဦးဆောင် လုပ်နေတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စည်းကမ်းလေးတွေက အဆင့် တစ်ခုကိုဖေါ်ပြနေပါတယ်.စည်းကမ်းရှိရှိ ရေးကြမယ် ကွန်မင့်တွေပေးကြမယ်
ဆွေးနွေးကြမယ် ဆိုရင် စည်းကမ်းတောင်ခဏခဏပြင်စရာမလိုဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ ရွာသားတွေကို
ကိုယ့်အရေးအသားတွေ စာရဲ့အသံ(TONE) ကို မရိုင်းစေချင်ဘူး။ ချစ်လို့ပြောတာပါနော်။ရွာထဲကသူတွေ ကို ကျွန်တော့် အမြင် ယဉ်ကြပါ တယ်။ အနှစ်သာရ (theme) ကို စာဖတ်သူကိုတစ်ခုခု ပေးစေချင်တယ်။ အဆိပ်မသင့်စေချင်ပါဘူး။ ကိုယ့်စာ ကို်ယ့်ကဗျာ ကိုယ့်ကွန်မင့် ကြောင့်
စာဖတ်သူ ကို စာအဆိပ် မသင့်စေချင်ပါ။ ဟာသ လေးတွေဖတ်ရတဲ့အခါမှာလည်း တစ်နေ့တာနွမ်းနယ် သမျှ ကိုပြေစေပါတယ်။ ကိုပေါက်ဖေါ် တို့ ကိုဝင်းတော့ကာတို့ ဆိုရင် ကျွန်တော် ကို ရယ်အောင်လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ တစ်ပုဒ် ဖတ်လို့ ရယ် လိုက်တိုင်း ကျေးဇူးတင်နေမိပါတယ်။
အယဉ်တွေစုဝေးအောင်လို့ အရိုင်းတွေပယ်နိုင်အောင်တော့ စီစစ်ရေး (မလျောမတင်း)flexible တစ်ခုတော့လိုအပ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ချစ်ခြင်းအားဖြင့်…ကိုဆန်နီ
သူကြီးခင်ဗျာ တရုတ်ကနေ MG ထဲကို လိုဏ်ဂေါင်း ဖောက်ဝင်နေရတယ်ဗျ။ ရိုးရိုးဝင်လို ့မရတော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို ့လဲ ခင်ဗျာ။ ကောနက်ရှင် မကောင်းလို ့လား။ တခြား site တွေတော့ ချက်ခြင်းတက်တယ်။
တရုတ်က MG ကို Mafia Group ထင်လို့ ဘန်းထားလို့ပါကွယ်
အာဏာပိုင် ပိုင်းနဲ့ ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး ပိတ်ဆို့မှုတွေကို
ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ တောင်းဆိုပေးပါ့မယ် ။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို
ကြိုဆို ပါတယ် လို့လည်းပြောပေးပါ။ သည့်ထက်ပိုပြီး ပွင့်လင်း
မြင်သာမှု ရှိတဲ့ တရုတ် မင်းသမီးလေးတွေရဲ့
အနုပညာ ပြကွက်လေးတွေကိုလည်း မျှော်လင့် နေပါတယ်လို့။
အဆွေတော် အနေနဲ့ ခနတော့ သီးခံစောင့်ဆိုင်းပေးပါနော။
အထွေထွေ မထူး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ချုပ်
Thit San Khant says:
Comments တွေအများကြီးရထားတဲ့ ပို့စ်အတွင်းမှာ ကျုပ်မပါဘူးဆိုရင်
ကျုပ်ဘာမှမသိလိုက်ရာကျမယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျုပ်လည်းဝင်ဖတ်တယ်ဆိုတာလေး